प्यूठानमा आगलागीमा दाजुबहिनीको मृत्यु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २५, २०७७ गिरुप्रसाद भण्डारी
प्यूठान — आगलागीमा दाजुबहिनाको मृत्यु भएको छ । प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–३ रजवारास्थित दाङवाङका ७ वर्षीय बालक हिमाल र ३ वर्षीया बालिका चन्द्रकला रानाको मृत्यु भएको हो ।
बुधबार बिहान रमेश रानाको गोठमा आगलागी हुँदा रमेश रानाका छोराछोरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । अभिभावक घरमा नभएको बेला आगलागी भएको स्थानीय किशोर रानाले बताए ।
आगलागीको कारण र घटनाबारे प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख डिएसपी सुनिल मल्लले जानकारी दिए । शव पोस्टमार्टमका लागि प्यूठान अस्पतालमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १५:५८
एमाले प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य बोहोरालाई माओवादीले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य झपटबहादुर बोहोरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव नेपबहादुर चौधरीले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट निर्वाचित बोहोरालाई २४ घण्टाभित्र जवाफ माग्दै बुधबार स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेको बेला प्रदेश सभामा निर्वाचित भए पनि पछिल्लो समय एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै दल त्यागसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही किन नगर्ने ? भनेर माओवादीले बोहोरालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
'सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टी एकीकरण नभई पूर्ववत् अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) साविककै पार्टी रहने भएपछि पनि तपाईंको राजनीतिक क्रियाशीलता नेकपा (एमाले) पार्टीमा देखिएको र एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत नियुक्ति भएको देखिन आएकोले,' माओवादी केन्द्रले बोहोरालाई सोधेको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा १ र २ बमोजिम कार्य गर्नुभएको तथा उक्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ (ख) बमोजिमको कार्यसमेत गरेको बुझिन आएकोले तपाईंले पार्टी परित्याग गर्नुभएको हो भने तपाईंलाई किन पार्टी सदस्यबाट निष्कासन नगर्ने ?'
स्पष्टीकरण सोधिएको २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न बोहोरालाई निर्देशन दिइएको छ । माओवादीले सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् पार्टी ब्युँतिएपछि एमालेतिर लागेका सांसदहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका मन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभाका चार सांसदलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेमा लागेका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि माओवादीले पार्टीबाट हटाएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १५:५०